Sweden irikukoka chinzvimbo chekubhururuka nendege inodziya gasi kudzikisira tarisiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Sweden irikukoka chinzvimbo chekubhururuka nendege inodziya gasi kudzikisira tarisiro
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kutarisirwa • Sweden Kupwanya Nhau • Technology • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sweden ine tarisiro yekuda kusave nefossil na2045. Sechikamu chehurongwa, chikumbiro chekuti decarbonizing avhiyesheni muSweden chaziviswa nhasi, musi wa4 Kurume. Chirongwa ichi chinoratidza kuti Sweden yaizounza gasi yekudziya gasi yekudzivirira mafuta anotengesa muSweden. Chikamu chekudzora chingave 0.8% muna 2021, uye chichiwedzera zvishoma nezvishoma kusvika pa 27% muna 2030. Iwo ekudzikira anofungidzirwa kunge akaenzana ne1% (matani 11 000) mafuta emuchadenga anochengetedza muna 2021, 5% (56 000 matani) muna 2025 uye 30% (mazana matatu nemakumi matatu ezviuru zvematani) muna 340. Izvi zvinoita kuti Sweden ive mutungamiri asinga pikiswi mukushambadzira ndege.
“Tinoda vatangiri uye nyika dzakashinga kuti titungamire mukukura kunogarika kwendege. Ndiri kuda kukorokotedza Sweden - yakamisikidza bhawa zvakanyanya pamusoro pezvinouya pakudzora mweya yekubvisa nekushandisa inowedzerwazve jet mafuta. Ichi chiziviso chinogadza yakajeka uye yakashinga tarisiro, uye inoratidza iyo yekufambisa nendege inofanira kutora kuitira kuti isvike yayo emission kudzikisira tarisiro. Zvakare, zvinoita kuti pave nekufungidzira kuri kudiwa kwekuti Neste nevamwe vanogadzira mafuta emagetsi jeti vagone kuwedzera mari, ”anodaro CEO weNeste Peter Vanacker.
Norway yakazivisa yayo 0.5% biofuel inosanganisa mvumo muna 2020. Kuchave nekwanisi inokwana pamusika kuwanisa huwandu hwakatarisirwa hwemafuta emagetsi anovandudzwa kuSweden neNorway. Neste yakaburitsa yekutanga yekutengesa mavhoriyamu eNeste YANGU Renewable Jet Fuel inogadzirwa nemarara uye zvisaririra, uye kuchave nemakwenzi-akawedzera mavhoriyamu mumakore anotevera. Neste yazivisa kuti ichavaka zvimwe zvinogadziriswazve zvigadzirwa, izvo zvinogonesa kugadzirwa kweinowedzerwazve jet mafuta anosvika mamirioni miriyoni pagore na1.
Indasitiri yendege yepasirese yakamisikidza zvinangwa zvekudzikisa gasi inokanganisa kupisa kubva mukufambisa kwemhepo, kusanganisira kabhoni-isina kwazvakarerekera kukura kubva muna2020 nekupfuura, uye kudzikiswa makumi mashanu muzana kwemambure emuchadenga emhepo kabhoni ne50. Aviation inoda mhinduro dzakawanda dzekudzikisa gasi inokanganisa kupisa. Parizvino, mafuta emuchadenga anochengetedza anopa imwe chete nzira inoshanda kune zvisaririra zvemafuta emagetsi ekumisa ndege.